Nidaamyada, Oggolaanshaha iyo Oggolaanshaha | Martech Zone
Nidaamyada, Oggolaanshaha iyo Oggolaanshaha
Isniin, Maarso 16, 2009 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Waxaan aqrinayay joornaalka Naqshadeynta Webka (joornaal qurux badan!) Qaybta maqalkuna waxay ahayd:
Shirkad barnaamijyadu soosaaraan ayaa soo saarta koodh. Shirkad maamuleyaal ah ayaa soo saarta shirar. Tweet laga bilaabo Greg Knauss, Barnaamij.
Waxay igu kaliftay inaan ka fekero bilowga. Sida bilowgu u kobcayo, waxaan u maleynayaa inay jiraan dhowr nooc oo shaqaale ah oo dusha ka yimaada:
Marka hore kaalay kuwa wax sameeya. Waxyaabaha ayay qabtaan, iyadoon loo eegin.
Markaa madaxda kaalay. Waxay gacan ka geystaan ​​hagida dadka wax qabanaya waxayna ka caawiyaan sidii shirkadda loogu riixi lahaa jihada saxda ah.
Kadib kaalay maareeyayaasha. Waxay abuuraan geeddi-socodyo, rukhsad iyo oggolaansho.
Tallaabada 3 waa tallaabada qaska. Hadafyada geeddi-socodka, rukhsadaha iyo oggolaanshuhu waa in la hubiyo tayada iyo amniga. Si kastaba ha noqotee, markay carqaladeyso hal-abuurka iyo hindisaha shirkad soo kordheysa, way aasi doontaa. Waxaan ku arkay tan bilow kasta oo aan ka soo shaqeeyey.
Bixinta buugga midabaynta iyo midabyada loo yaqaan an artist oo u sheeg iyaga inay safafka ku jiraan waa hab dabka lagu hubiyo si loo hubiyo inaadan helin gabal farshaxan aan qiimo lahayn.
Tags: kootada twitter-ka kor loo qaadayqaraaradashir-jaraa'id
Soo Bandhigid: Hab Fudud Oo Lagu Dili Karo Kulan
Ka bood resume iyo Carwada Shaqo
Shaqada ugu weyn ee maamulku maahan in la xakameeyo laakiin waa in la awood yeesho. Markay ururadu bilaabaan inay diirada saaraan xadidaada waxay dadku samayn karaan halkii ay ka qaadan lahaayeen awooda dadka inay wax abuuraan, waxaad bilaabaysaa inaad yeelato dhibaatooyin daran.
Nasiib daro, maareeyayaal badan ayaa ku dhegan maskaxda maskaxda ah in maamulku u baahan yahay qeexida sida qof kale u shaqeynayo. Xaqiiq ahaan, maamulayaasha waaweyni waa dadka qaado isbaarooyinka in la shaqeeyo si dadka caqliga leh ee ururka u leeyihiin awood ay ku gutaan maskaxdooda halkii ay kula dagaalami lahaayeen nidaamka.
Waxaan ku soo koobnay waxa ku dhaca shaqaalaha ku hoos jira maamulka dulmiga leh bishii hore daabacaaddayada 'Superbowl Ad' ee Blog Habka. Sheekada oo dhameystiran ka eeg:
Aamiin, Robby! Maareeyayaal aad u tiro badan ayaa aaminsan inay shaqadooda tahay inay 'horumariyaan' shaqaalaha halkii ay 'u suurta gelin lahaayeen' shaqaalaha. Had iyo jeer dadku waxay igu soo dallacaan biil 'fudud oo madax ah', laakiin sidoo kale marwalba waan dhaafi jiray wixii laga filayo markii fursad la i siiyo.